Android တစ်ခုအားလက်တစ်ဖက်ဖြင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရိုက်ကူးခြင်း Androidsis
အောက်ပါလက်တွေ့ကျသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာနှင့် ၁၀ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် Lumidla Carrazan ဒီ Androidsis You Tube channel ကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပို့ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအနီးကပ်လိုက်လျှောက်သူ၊ ဒီနေ့မှာ Android အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအခမဲ့ application တစ်ခုကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဆိပ်ကမ်းများမှအမြန်ရိုက်ချက်.
လျင်မြန်စွာ၊ တစ်လက်တည်းဖမ်းယူခြင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ၏ Home ခလုတ်ကိုရိုးရှင်းသောရှည်လျားသောကလစ်တစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ဗီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်ပြောနေသည့် application နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်း Lumidla ကကျွန်ုပ်တို့အားအကြံပြုထားသည့် application အကြောင်းသင်ဘာသိချင်သနည်း။ ကောင်းပြီပြီးတော့သင်ရုံရန်ရှိသည် «ဤစာကိုဆက်ဖတ်ရှုပါ».
စလုပ်ဖို့၊ Android ကိုစခရင်ရိုက်ဖို့ခလုတ်နှိပ်ရုံနဲ့ဘာမှတပ်ဆင်စရာမလိုဘူးလို့သူတို့ကိုပြောပါ ပါဝါ + Volume ကိုလျော့နည်း o အိမ်သို့ပိုပါဝါပါဤအချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည့် Android terminal ၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအလွန်မြန်ဆန်ပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းဖြင့်အောင်မြင်အောင်လုပ်လိမ့်မည်။
သငျသညျဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာတွေပါလျှင် အမြန်တစ်လက်တည်းရိုက်ယူပါ မျက်နှာပြင်ကိုသင့်စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်လိုအပ်ချက်သို့လျှော့ချရန်သို့မဟုတ်လျင်မြန်စွာမျှဝေရန်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ ထို့နောက်အောက်တွင်တင်ပြမည့်အကြံပြုချက်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်သေချာသည်။
ငါပြောနေသည့်အပလီကေးရှင်းသည်ပို့စ်အစတွင်သင့်အားထားခဲ့သည့်ပူးတွဲပါဗီဒီယိုတွင်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုပြသသည်မှာအလွန်ပေါ့ပါးသော application ဖြစ်သည်။ Device Assistance ကိုအသုံးပြုသည်ဂူဂဲလ် Now သည်၎င်း၏ Google Now ကိုထိပုတ်နိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုနည်းတူလုပ်ဆောင်သကဲ့သို့, သင်သည်ဤအပလီကေးရှင်းကိုတပ်ဆင်လိုပါကသင်သတိရရမည် Home ခလုတ်ကိုကြာမြင့်စွာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Google Now onTap ကိုရယူနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျွန်ုပ်တို့ဖျက်သိမ်းတော့မည်.
ဒီ application ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် မျက်နှာပြင်ရိုက်ကူးမှုလက်ထောက် ဒါ့အပြင်ဒီလိုင်းတွေရဲ့အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့လေးထောင့်ကွက်ကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ Google Play Store မှာအခမဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာကို install ပြီးကသက်ဆိုင်ရာပေးခြင်းပြီးတာနဲ့ Device သည်ခွင့်ပြုချက်များနှင့် internal storage ကိုရယူရန်ခွင့်ပြုသည်ကျွန်ုပ်တို့အပလီကေးရှင်းကိုအဆင်ပြေစွာ configure လုပ်မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ Home ခလုတ်ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်မျှနှိပ်ရုံဖြင့်ဖန်သားပြင်ကိုမည်သည့်အပိုင်းကိုမဆို ရွေးချယ်၍ အမြန်မျှဝေခြင်းဖြင့်အရွယ်အစားကိုပင်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ။
အကယ်၍ သင် application ကို uninstall လုပ်ရန်ရွေးချယ်ပါက၊ Home ခလုတ်သည်ရှည်လျားသောစာနယ်ဇင်းပေါ်တွင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်ရရှိသည်၊ ၎င်းသည် Google Now ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်စေ၊ Samsung ဆိပ်ကမ်းရှိ Bixby ၏ကိစ္စဖြစ်စေဖြစ်စေ၊ android settings ကိုရှာဖွေသည် applications များ လျှောက်လွှာမန်နေဂျာနှင့်တစ်ချိန်ကရှိ မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်အပေါ်ပိုင်းရှိအစက်သုံးစက်ကိုနှိပ်ပါ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို select လုပ်တဲ့ pop-up ၀ င်းဒိုးအသစ်မှာ ပုံမှန်အက်ပ်များ ထို့နောက်အတွင်းပိုင်း option ကိုရွေးချယ်ပါ ကိရိယာအကူအညီ နှင့်ငါတို့အားအများဆုံးကွပ်မျက်ခံရခံရဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ action ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android ဖုန်းတစ်လုံးကိုလက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ဘယ်လိုရိုက်မလဲ
အတည်ပြုပြီးပါပြီ။ Moto Z2 PLay တွင် 3.000 mAh ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုထားသည်